र्‍यापिड टेस्ट र पिसिआर नतिजा फरक आउन सक्छ किन ? – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख २ गते २१:३३
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नियमित परीक्षण सुरू गर्ने
कोरोना परीक्षण गर्न निजी क्षेत्रका प्रयोगशालालाई सरकारको आह्वान
‘कोभिड-१९’ पोजेटिभ छ वा छैन भनेर विश्वले नै परीक्षण गर्ने वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड विधि भनेको पिसिआर परीक्षण विधि हो । यसमा हामीले प्रयोग गर्ने भनेको रियल टाइम, पोलियमरेक्स र चेन रियाक्सन हो ।
यस विधिमा जुन नमुना हामीले संलग्न गर्छौं, त्यस नमुनामा भाइरसको जीनको टुक्रा छ कि छैन भन्ने परीक्षण गरिन्छ । र, त्यो नमुनामा जीनको टुक्रा छन् भने त्यो ठाउँमा भाइरस बसेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले यो परीक्षणबाट के थाहा हुन्छ भने नमुना लिएका बखत सम्बन्धित व्यक्तिको शरीरमा भाइरस छ कि छैन । भाइरस भएको रिपोर्ट आउनु भनेको संक्रमण देखिनु हो ।
यसरी एकजनामा इन्फेक्सन (संक्रमण) भइसकेपछि भाइरस मानिसको शरीरमा कति रहन्छ भन्ने कुरा व्यक्तिपिच्छे फरक हुनसक्छ । मानिसको शरीरको रोगसँग लड्ने जुन क्षमता हुन्छ, त्यो हिसाबमा कसै–कसैमा यो भाइरस छिट्टै पनि निष्क्रिय हुन सक्छ । कसैमा भने तीनदेखि चार दिनसम्म यो भाइरस शरीरमा रहन सक्ने हुन्छ । तर, पिसिआर परीक्षण भनेको अत्यन्तै जटिल, समय लाग्ने हुन्छ, जसका लागि प्रयोगशालाको सेटअप पनि विशेष किसिमको हुनुपर्छ । पिसिआर परीक्षणका लागि परीक्षण गर्ने व्यक्ति पनि विशेष तालिम पाएको र विज्ञता हासिल गरेको हुनपर्छ ।
अर्जेन्टको समयमा ६ घन्टा सम्म यसको नतिजा दिन सकिन्छ । तर, साधारणतया २४ देखि ७२ घन्टाको समय यस परीक्षणका लागि लाग्न सक्छ। एकैचोटीमा नतिजा आउँदैन ।
कोरोना भाइरस आएदेखि नै विभिन्न वैज्ञानिकहरु कुनै अन्य विधिबाट पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ कि भनेर लगातार अनुसन्धान गरिरहेका छन् । त्यही अनुसन्धानको आधारमा शरिरले जुन भाइरससँग लड्नको लागि ‘एन्टीबडी’ बनाउने हुन्छ । त्यो एन्टीबडी पनि परीक्षण गरेर रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ कि भनेर नयाँ–नयाँ विधिहरुको विकास भइरहेका छन् ।
कोभिड–१९ रोगका विरुद्ध संक्रमण भएको शरीरले २ किसिमको एन्टीबडी बनाउँछ । सुरुमा बन्ने आइजिएम, आइजिजी हो । आइजिएम रोग लागिसकेपछि ३ देखि ५ पछि शरिरमा देखिन थाल्छ ।
आइजिएम झण्डै शरिरमा २ देखि ३ हप्तासम्म रहन सक्छ । रोग लागेको २ हप्तापछि आइजिजि भन्ने एन्टीबडी बन्न थाल्छ । आइजिजी एन्टीबडी महिनौंसम्म रहन सक्छ । हामीले अन्य रोगबाट यही अनुभव लिएका छौं।
सुरुमा रोग हुँदा भाइरस मात्र भेटिन्छ । त्यसपछि ५÷७ दिनमा आइजिएम एन्टीबडी र २ हप्तापछि आइजिजि एन्टीबडी भेटिनसक्छ । १ महिनापछि पनि भाइरस नेगेटिभ हुनसक्छ । आइजिएम पनि नेगेटिभ हुनसक्छ तर आइजिजी धेरै लामो समयसम्म रहनसक्छ ।
यसको मतलव, परीक्षण गर्दा सुरुका दिनमा पिसीआर मात्र पोजेटिभ आउनसक्छ । एन्टीबडीका लागि गरिने परीक्षण नेगेटिभ हुन्छ । जसको हप्ता दश दिनपछि पिसिआरबाट पनि पोजेटिभ आउने र एन्टीबडी पनि पोजेटिभ आउनसक्छ । त्यस्तै, ३–४ हप्ता बित्तिसकेपछि जब कि भाइरस शरिरबाट हराइसकेको हुन्छ, उक्तबेलामा पिसिआरचाहीँ नेगेटिभ आउने तर एन्टीबडीको परीक्षणमा पोजेटिभ देखाउन पनि सक्छ ।
एन्टीबडी परीक्षण गर्ने विभिन्न विधिका विकास भएका छन् ।
यो आफैँमा नयाँ प्रविधि भने होइन । हामीले अरु पनि भाइरसका रोगहरु डेंगु, हेपाटाइटिस, एचआइभी लगायतका सबैको डाइग्नोसिस् एन्टीबडी परीक्षणकै माध्यमबाट गरिरहेका छौं ।
त्यस्तै, एलआईजा र र्यापिड टेष्ट हो । एलआइजा पनि ल्याबमा उपलब्ध छन् । यसका लागि ल्याब भित्र नै बसेर परीक्षण गनुपर्छ । एलआइजा गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति तथा मेसिनको आवश्यक्त पर्दछ ।
यो पनि एक–दुई वटा गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यो विधिबाट परीक्षण गर्नका लागि ४ देखि ६ घण्टा सम्म लाग्नेहुन्छ । केही कम्पनीहरुले एन्टीबडीको परीक्षणको लागि एलआइजा प्रविधि पनि विकास गरेसकेका छन् ।
अर्को सजिलो विधि एन्टीबडीको जाँच भनेको र्यापिड टेष्ट हो । हाल आएर नेपालमा पनि यो विधिको प्रयोग गरेका छौं । अन्य देशमा यो किटबाट परीक्षण सुरु गरेका छन् । अमेरिका तथा अष्टे«लिया जस्ता देशले पनि यस बिधिबाट परीक्षण सुरु गरेका छन् ।
विभिन्न देशहरुले पिसिआर परीक्षणका लागि आ–आफ्नो मापदण्ड तोकेका छन् । नेपालको पनि त्यसको आफ्नै मापदण्ड रहेको छ । सबै जनसंख्यालाई कुनैपनि देशले पनि सबैको पिसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर मापदण्ड राखेका छैनन्।
र्‍यापिड टेष्टबाट फाइदा के छ भने, यसका लागि धेरै विज्ञता चाहिँदैन । प्रयोगशाला पनि नचाहिने र फिल्डमा गएर गर्न सकिने र थोरै तालिम दिए पर्याप्त हुनेहुन्छ । यसबाट १५ मिनेटमा नै नतिजा आउने हुन्छ ।
प्रयोगाला परीक्षण रोगको लागि आफैंमा पूरा हुँदैन । बिरामीको त्यति बेलाको अवस्था अन्य परीक्षणसँग मिलाएर रिपोर्टको नतिजा मूल्याकंन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, एउटा मापदण्ड बनाएर पिसीआर परीक्षणको दायरामा आउनका उनीहरुलाई अन्य विकल्पका टेष्टको व्यवस्था गर्न सकिए धेरै व्यक्तिको परीक्षण गर्न सम्भव हुन्छ । त्यसका साथ–साथै एन्टीबडी परीक्षणको अर्को के फाइदा छ भने रोग निको भएपछि पिसीआर परीक्षण नेगेटिभ आउँछ । जसलाई पहिला नै रोग लागिसकेको छ त्यतिबेला लक्षण देखिएन वा पीसीआर हुन सकेन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पछि परीक्षण गर्ने भनेको एन्टीबडी बाँकी रहन्छ ।
एन्टीबडी परीक्षण गरेर हाम्रो समुदायमा कति व्यक्ति कुनै बेला कोरोनाबाट संक्रमण भएका थिए बुझ्न पनि यो प्रविधिले निकै सहयोग गर्छ ।
अझ बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने, पिसिआर भन्दापनि केही माथिका अन्य परीक्षण पनि रहेका छन् । पिसिआरमा साधारणतया हामीले भाइरसको लागि २–३ वटा जिन हेर्ने कोसिस गर्छौं । यो माथि भन्दा ‘जिन सिक्वेन्स’ भन्ने परीक्षण हुन्छ । जसले भाइरसको पूरा परीक्षण गर्छ ।
यसरी प्रयोगशालाका परीक्षण सँगसँगै बिरामीको ज्वरो, खोकी, श्वासप्रश्वासमा समस्या कि छैन ? उसको हिस्ट्री के हो ? सिटी स्क्यानको नतिजा, एन्टीबडीको नतिजा, पीसीआरको नतिजा सबै मिलाएर एक ठाउँमा राख्दा परीक्षणको दायरा बढाउन सकिन्छ ।
पिसीआरको परीक्षण लामो प्रक्रिया छ । हामीकहाँ प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका उपकरणहरु छन् ।
जुन २४/४८/९६ परीक्षण गर्न सक्ने क्षमताका रहेका छन् । एउटा परीक्षण गर्दा झण्डै उत्ति नै प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने, धेरै संख्या(ब्याच)मा परीक्षण गर्दा सोही प्रक्रियामा गनुपर्छ । हाम्रो कोसिस के रहन्छ भने, सकभर धेरैभन्दा धेरै एकैचोटी परीक्षण गर्न सुरु गरियो भने एउटा निश्चित समयमा धेरै भन्दा धेरै नतिजा दिन सकिन्छ ।
अर्जेन्टको समयमा ६ घन्टा सम्म यसको नतिजा दिन सकिन्छ । तर, साधारणतया २४ देखि ७२ घन्टाको समय यस परीक्षणका लागि लाग्न सक्छ। एकैचोटीमा नतिजा आउँदैन । एकचोटीमा २ वटा जिन हेर्ने खोज्छौं एउटा मात्र आउँछ, थप अर्को जिनको लागि परीक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले एउटा नमुना यत्ति नै बेरमा परीक्षण भएर नतिजा आइसक्छ भन्न सकिँदैन ।
(राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयाेगशालाकी निर्देशक डा‍‍. रुना झाले परीक्षणसम्बन्धि गरेकाे व्रिफिङकाे आधारमा हेल्थपाेस्ट नेपालका पुष्पराज चाैलागाईंले तयार पारेकाे सामग्री)
Tags: डा. रुना झा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला